Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle oo dib loo dhigayo. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle oo dib loo dhigayo.
Doorashada Madaxweynaha Hirshabelle oo dib loo dhigayo.
September 10, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Baarlamaanka Hirshabelle ayaa maanta go’aan ka gaaraya xiliga ay dhacayso doorashada Madaxweynaha Hirshabelle oo lagu wadey in ay dhacdo maalinta Salaasada ah ee 12 Siteembar.
Guddiga doorashadda Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa baarlamaanka u gudbiyey codsiga ah in doorashadu dhacdo 16 Siteembar oo ku beegan Sabtida, waxaana ay sabab ka dhigeen in waxyaabo badan qabyo ka yihiin.
War saxaafadeed dhawaan ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa laga digey in maamulka Hirshabelle burbur ku yimaado oo maamul kale looga dhawaaqo Beledweyne, waxaana ay kula taliyeen in la xaliyo khilaafaadka jira.
Musharixiin gaaraya lix musharax ayaa u taagan xilka Madaxweynaha kuwaas oo badankood ka soo jeedaan gobolka Hiiraan.
Baarlamaanka Hirshabelle ayaa xilkii ka xayuubiyey Madaxweynihii Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo xilka hayey muddo sanad ku dhaw . Madaxweynaha xilka laga qaadey ayaa saldhig ka dhigtey magaalada Beledweyne waxaana uu isu caleema saarey Madaxweynaha Hiiraan State.